सोधिने प्रश्न - वेफांग Hualand मशीनरी कं, लिमिटेड
म किन Huamachinery कम्पनी बाट खरीद गर्नुपर्छ?
हामी सिर्फ एक कारखाना भन्दा बढी हुनुहुन्छ किनभने। हाम्रो लक्ष्य हरेक ग्राहक आफ्नो खरीद र किनमेल अनुभव 100% सन्तुष्ट हो भनेर निश्चित छ। तपाईं पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् भने हामीले तुरुन्तै आफ्नो चिन्ता जवाफ हुनेछ।
के भने मेरो वस्तु समस्या छ?
हामी एक-वर्ष वारेन्टी छ, कारण गुणस्तर समस्या निःशुल्क प्रतिस्थापन भागहरु हामी पनि नयाँ अवस्थामा वस्तुहरूको लाभ स्वीकार गर्न खुशी हुनुहुन्छ। हाम्रो ग्यारेन्टी मात्र मिसिन को मूल क्रेता लागि लागू हुन्छ।
तपाईंले खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि, हामी तपाईंलाई प्रोफोर्मा चलानी हाम्रो बैंक जानकारी, बैंक यो पी ल्याउन र जम्मा लागि टी / टी बनाउन अनुरोध पठाउन हुनेछ। एकल सेट लागि, आफ्नो मिसिन5दिन भित्र वितरण गर्न सकिन्छ हामी जम्मा रही पछि, हामी पोर्ट पठाउन र समुद्र तपाईंलाई बचाउनुहुनेछ।
थप ह्यान्डलिङ शुल्क लागि --उत्पादन मामला, तपाईं भुक्तानी को 100% हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो भत्ता अन्तर्गत उत्पादन र ढुवानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ
-यदि तपाईं अझै पनि बुझ्न छैन, कृपया मलाई सोध्न hestitate छैन
म नमूना लागि 1 सेट आदेश गर्न सक्छन्?
Yes.Sample स्वीकार्य, तपाईं नमूना गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।